မိဘတွေ အိုမင်းလာတဲ့အခါ သူတို့ကိုစိတ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ဘာတွေရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်သလဲ? » Lifestyle Myanmar
မိဘတွေ အိုမင်းလာတဲ့အခါ သူတို့ကိုစိတ်ထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင် ဘာတွေရှောင်ရှားဖို့ လိုအပ်သလဲ?
အသက်အရွယ်အိုမင်းတဲ့ မိဘတွေနဲ့ စကားပြောနေရတာဟာ အသက်အရွယ်ကွာဟမှုကြောင့် အတော်အသင့် စိတ်ပင်ပန်းမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ၎င်းကပဋိပက္ခများနှင့် မတူတဲ့ ပြဿနာများကို မကြာခဏ ဦးတည်နေနိုင်ပါတယ်။ အလန်းဇန်း
ဒါးGalitski အမည်ရှိ အနုပညာရှင်တစ်ဦးသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ အသက်အိုမင်းသူများနှင့်အတူ သစ်သားပန်းပုများကို ဘယ်လိုပြုလုပ်လဲ ဘယ်လိုဆေးချယ်လဲဆိုတာကို သူတို့ဆီမှာ သင်ယူခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ သူက အိုမ
င်းတဲ့မိဘတွေနှင့် လွယ်ကူစွာဆက်ဆံဖို့ ကူညီနိုင်လိမ့်မယ့် နည်းလမ်းများကို ယခုလိုအကြံပေးခဲ့ပါတယ်။
၁။ သူတို့ကို ပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့
ကျွန်တော်တို့ ကလေးဘ၀ဖြစ်ခဲ့တုန်းက ကျွန်တော်တို့မိဘတွေက မိဘစကားကိုနားထောင်တဲ့ အမှတ်ပြည့်ရတဲ့ အိမ်နီးချင်း ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကို အမြဲတမ်း ပြောပါလိမ့်မယ်။ ယခု သူတို့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အိ
မ်နီးချင်းတွေအကြောင်းကို နားထောင်ရဖို့ သေချာသလောက်ရှိပါတယ်။ သူတို့ ဒီလိုစကားပြောတာကို နားထောင်ဖို့ တော်တော်လေး အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း သူတို့ကိုပြောင်းလဲဖို့ မကြိုးစားပါနဲ့။ သူတို့ကို နားလည် လက်ခံ
၂။ ပဋိပက္ခများကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။
ကလေးတွေလိုပဲ အသက်ကြီးတဲ့ မိဘတွေကို စိတ်ရှည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ရန်လိုမှု၊ အမျက်ဒေါသတွေကို မတုံ့ပြန်ပါနဲ့။ သင်ဒါကိုပြုလုပ်လျှင် သင်ဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့စကားကို နားထောင်ဖို့နှင့် ပြဿနာမှန်ကို ဖြေရှင်းဖို့ြ
ကိုးစားပါ။ ဒါက နောက်ဆုံးမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း မခံစားရစေမယ့် တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
၃။ စကားပြောဆိုရာမှာ နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့
သူတို့က ကျွန်တော်တို့လိုပဲ ဒေါသတွေ၊ စိတ်လှုပ်ရှားတာတွေ ရှိတတ်ပါတယ်။ သူတို့လည်း လူထဲကလူပါပဲ။ သူတို့ စိတ်ဆိုးတဲ့အခါ သူတို့ကို စကားပြောဆိုဖို့ ကြိုးစားပါ။ သူတို့က အသက်အရွယ်ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ကို
ဘယ်တော့မှ အပိုလူလို့ သဘောမထားပါနဲ့။
သင်ရဲ့ အိုမင်းတဲ့မိဘတွေကို ဂရုစိုက်ကူညီဖို့ ခြေလှမ်းက ဘာလဲ?
၁။ အကြင်နာမေတ္တာကို ပြသပါ။ ဒါပေမယ့် သနားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။
အကြင်နာမေတ္တာစိတ်က အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ကို အကူအညီမဲ့သူ၊ဆင်းရဲတဲ့သူတစ်ယောက်ကဲ့သို့ မပြုမှုပါနဲ့။
၂။ သူတို့ပခုံးပေါ်မှာ ငိုဖို့သဘောထားပါ
သင့်မိဘတွေဆီကို မပြေလည်မှုတွေ ညီးညူဖို့ ဘယ်တော့မှ မသွားပါနဲ့။ သူတို့အတွက် ပုံပြင်တစ်ပုဒ်နဲ့ အမှန်တရားတစ်ခု နှစ်ခုရှိဖို့ အမြဲတမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ သင့်မိဘတွေက သင့်ကိုဘ၀တစ်ခုလုံး ထောက်ပံ့ပြီးသွားပါပြီ။ ဒီအချိန်က သ
င်ကျေးဇူးပြန်ဆပ်ရမယ့်အချိန်ပါ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မပြေလည်မှုတွေကို သူတို့ကို မပြောရပါဘူး။ သူတို့ကို မုသားပြောသင့်ရင် ပြောရပါမယ်။ သင်က သူတို့ထက်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းပိုပြီးရှိတာကြောင့် သူတို့ကိုပဲ ထောက်ပံ့မှု ဖြ
၃။ သူတို့ကို ခွင့်လွတ်ပေးပါ
အတိတ်ကာလကို ခွင့်လွတ်ဖို့ သင်ယူခြင်းက အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ယနေ့သင့်မိဘတွေကို သင်ခွင့်မလွတ်ရင် မနက်ဖြန် သိပ်နောက်ကျပါလိမ့်မယ်။ သင်ရှေ့ဆက်ချင်လျှင် သင်ခိုင်မာမှု ရှိရပါမယ်။ ခွင့်လွတ်ဖို့ လေ့လာပါ။
သတိရပါ- သင်သည် သူတို့ထားခဲ့ရမယ့် တစ်ခုတည်းသောအရာဖြစ်ပါတယ်။ မိဘတွေ အိုမင်းလာတဲ့အခါ သူတို့ကို စောင့်ရှောက်ပါ။ ပစ်ပယ်မထားပါနဲ့။
မိဘတှေ အိုမငျးလာတဲ့အခါ သူတို့ကိုစိတျထိခိုကျမှုမဖွဈအောငျ ဘာတှရှေောငျရှားဖို့ လိုအပျသလဲ?
အသကျအရှယျအိုမငျးတဲ့ မိဘတှနေဲ့ စကားပွောနရေတာဟာ အသကျအရှယျကှာဟမှုကွောငျ့ အတျောအသငျ့ စိတျပငျပနျးမှုရှိနိုငျပါတယျ။ ၎င်းငျးကပဋိပက်ခမြားနှငျ့ မတူတဲ့ ပွဿနာမြားကို မကွာခဏ ဦးတညျနနေိုငျပါတယျ။ အလနျးဇနျး
ဒါးGalitski အမညျရှိ အနုပညာရှငျတဈဦးသညျ နှဈပေါငျးမြားစှာ အသကျအိုမငျးသူမြားနှငျ့အတူ သဈသားပနျးပုမြားကို ဘယျလိုပွုလုပျလဲ ဘယျလိုဆေးခယျြလဲဆိုတာကို သူတို့ဆီမှာ သငျယူခွငျးဖွငျ့ အလုပျလုပျကိုငျခဲ့ပါတယျ။ သူက အိုမ
ငျးတဲ့မိဘတှနှေငျ့ လှယျကူစှာဆကျဆံဖို့ ကူညီနိုငျလိမျ့မယျ့ နညျးလမျးမြားကို ယခုလိုအကွံပေးခဲ့ပါတယျ။
၁။ သူတို့ကို ပွောငျးလဲဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့
ကြှနျတျောတို့ ကလေးဘဝဖွဈခဲ့တုနျးက ကြှနျတျောတို့မိဘတှကေ မိဘစကားကိုနားထောငျတဲ့ အမှတျပွညျ့ရတဲ့ အိမျနီးခငျြး ကောငျလေးတဈယောကျအကွောငျးကို အမွဲတမျး ပွောပါလိမျ့မယျ။ ယခု သူတို့အသကျကွီးလာတဲ့အခါ အိ
မျနီးခငျြးတှအေကွောငျးကို နားထောငျရဖို့ သခြောသလောကျရှိပါတယျ။ သူတို့ ဒီလိုစကားပွောတာကို နားထောငျဖို့ တျောတျောလေး အနှောကျအယှကျဖွဈနိုငျသျောလညျး သူတို့ကိုပွောငျးလဲဖို့ မကွိုးစားပါနဲ့။ သူတို့ကို နားလညျ လကျခံ
၂။ ပဋိပက်ခမြားကို ရှောငျကွဉျပါ။
ကလေးတှလေိုပဲ အသကျကွီးတဲ့ မိဘတှကေို စိတျရှညျဖို့ လိုအပျပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ရနျလိုမှု၊ အမကျြဒေါသတှကေို မတုံ့ပွနျပါနဲ့။ သငျဒါကိုပွုလုပျလြှငျ သငျဆုံးရှုံးပါလိမျ့မယျ။ သူတို့ရဲ့စကားကို နားထောငျဖို့နှငျ့ ပွဿနာမှနျကို ဖွရှေငျးဖိွု့
ကိုးစားပါ။ ဒါက နောကျဆုံးမှာ အပွဈရှိကွောငျး မခံစားရစမေယျ့ တဈခုတညျးသော နညျးလမျးဖွဈပါတယျ။
၃။ စကားပွောဆိုရာမှာ နှဈလိုဖှယျဖွဈဖို့ မမြှျောလငျ့ပါနဲ့
သူတို့က ကြှနျတျောတို့လိုပဲ ဒေါသတှေ၊ စိတျလှုပျရှားတာတှေ ရှိတတျပါတယျ။ သူတို့လညျး လူထဲကလူပါပဲ။ သူတို့ စိတျဆိုးတဲ့အခါ သူတို့ကို စကားပွောဆိုဖို့ ကွိုးစားပါ။ သူတို့က အသကျအရှယျကွီးတဲ့လူတှဖွေဈတာကွောငျ့ သူတို့ကို
ဘယျတော့မှ အပိုလူလို့ သဘောမထားပါနဲ့။
သငျရဲ့ အိုမငျးတဲ့မိဘတှကေို ဂရုစိုကျကူညီဖို့ ခွလှေမျးက ဘာလဲ?
၁။ အကွငျနာမတ်ေတာကို ပွသပါ။ ဒါပမေယျ့ သနားခွငျးမဟုတျပါဘူး။
အကွငျနာမတ်ေတာစိတျက အရေးကွီးပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ သူတို့ကို အကူအညီမဲ့သူ၊ဆငျးရဲတဲ့သူတဈယောကျကဲ့သို့ မပွုမှုပါနဲ့။
၂။ သူတို့ပခုံးပျေါမှာ ငိုဖို့သဘောထားပါ
သငျ့မိဘတှဆေီကို မပွလေညျမှုတှေ ညီးညူဖို့ ဘယျတော့မှ မသှားပါနဲ့။ သူတို့အတှကျ ပုံပွငျတဈပုဒျနဲ့ အမှနျတရားတဈခု နှဈခုရှိဖို့ အမွဲတမျးလိုအပျပါတယျ။ သငျ့မိဘတှကေ သငျ့ကိုဘဝတဈခုလုံး ထောကျပံ့ပွီးသှားပါပွီ။ ဒီအခြိနျက သ
ငျကြေးဇူးပွနျဆပျရမယျ့အခြိနျပါ။ ဟုတျပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ မပွလေညျမှုတှကေို သူတို့ကို မပွောရပါဘူး။ သူတို့ကို မုသားပွောသငျ့ရငျ ပွောရပါမယျ။ သငျက သူတို့ထကျစှမျးဆောငျနိုငျစှမျးပိုပွီးရှိတာကွောငျ့ သူတို့ကိုပဲ ထောကျပံ့မှု ဖွ
၃။ သူတို့ကို ခှငျ့လှတျပေးပါ
အတိတျကာလကို ခှငျ့လှတျဖို့ သငျယူခွငျးက အလှနျအရေးကွီးပါတယျ။ ယနသေ့ငျ့မိဘတှကေို သငျခှငျ့မလှတျရငျ မနကျဖွနျ သိပျနောကျကပြါလိမျ့မယျ။ သငျရှဆေ့ကျခငျြလြှငျ သငျခိုငျမာမှု ရှိရပါမယျ။ ခှငျ့လှတျဖို့ လလေ့ာပါ။
သတိရပါ- သငျသညျ သူတို့ထားခဲ့ရမယျ့ တဈခုတညျးသောအရာဖွဈပါတယျ။ မိဘတှေ အိုမငျးလာတဲ့အခါ သူတို့ကို စောငျ့ရှောကျပါ။ ပဈပယျမထားပါနဲ့။
တစ်ပတ်အတွင်း သင့်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ရပ်တန့်စေမယ့် နည်းလမ်းလေး
အပြုံးချိုချိုနဲ့ ရက်စက်တတ်သူများကို သတိထား
ရုံးအလုပ် နဲ့ အလွတ်တန်းအလုပ် (Freelance) ရဲ့ ကွာခြားချက်များ
Kyaw Htike Aung March 21, 2018